काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता कायम राखेका छन् ।
पछिल्लो अपडेट अनुसार बालेन शाहले २५ हजार १८५ मत ल्याएर अग्रता बनाइरहेका छन् ।
बालेन एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितभन्दा ११ हजार ९८७ मतले अगाडी रहेका छन् । केशव स्थापितले १३ हजार १९८ मत पाएका छन् ।
त्यस्तै गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी कांग्रेसकी उमेदवार सिर्जना सिंहले १२ हजार ४६० मत प्राप्त गरेकी छन् ।
त्यसैगरी उपमेयरमा भने नेकपा एमालेकी सुनिता डंगोलले १९ हजार ९५६ मत पाएकी छन् भने एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले ६ हजार ३१६ र राप्रपाकी विनिता मगैयाले ३४४९ मत पाएकी छन् ।
काठमाडौँ महानगरको वडा नम्बर १, २, ३, ४ र ५ को मतगणना सकिएको छ र पाँचै वडामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । अहिले वडा नम्बर ६, ७, ८, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ३२ को मतगणना भइरहेको छ ।
अध्यक्ष नेपाल र भारतीय राजदुत श्रीवास्तवबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपालका लागि भारतका नवनियुक्त राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच आज भेटघाट भएको छ । अध्यक्ष नेपाललाई भेट्न राजदूत श्रीवास्तव कोटेश्वरस्थित निवासमा
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग नवनियुक्त भारतीय राजदुत नवीन श्रीवास्तवले भेटवार्ता गरेका छन् । गत शनिबार आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न काठमाडौँ आइपुगेका राजदुत श्रीवास्तवले शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई भेट गरेका हुन् ।
विभिन्न चार देशका राजदुतद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष विभिन्न चार देशका राजदुतले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक समारोहमा कतारकालागि राजदुत डा. नरेशविक्रम ढकाल, चीनका राजदुत विष्णुपुकार श्रेष्ठ,
चीनका लागि नेपाली राजदुतमा विष्णुपुकार श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौँ । चीनका लागि नेपाली राजदुतमा विष्णुपुकार श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । श्रेष्ठलाई विहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनको आवासीय राजदुतमा नियुक्त गरकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा २८२ बमोजिम